Kordhin lagu daro Pidgin ee Gnome-Shell | Laga soo bilaabo Linux
Kordhin lagu daro Pidgin ee Gnome-Shell
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhamaanteen waan ognahay in macmiilka asalka ah ee warqadaha Gnome es Faham, sidaas darteed isdhexgalka leh Qolofta Gnome Waa wax weyn in la tudho, laakiin isku mid maahan kiiska Pidgin taas aniga ahaan, way iga fiican tahay.
Nasiib wanaag waxaa jira kordhin taas oo noo ogolaaneysa inaan saxno tan, marka lagu daro helitaanka ogeysiisyada sida la mid ah Faham awood u lahaanshaha isla markiiba ka jawaab celinta fariin kasta oo soo socota.
Waxaan fureynaa terminal oo waxaan dhigeynaa waxyaabaha soo socda:
Mar dambe ayaan dib u bilaabi doonnaa Gnome-Shell. Waxaan riixeynaa isku dhafka Alt + F2, ayaan qornay «R» iyada oo aan xigashooyinka aan bixinno gal. Waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan kordhino kordhinta Qalabka Gnome-Tweak-Tool.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Kordhin lagu daro Pidgin ee Gnome-Shell
Hore u soco, ujeedadaydu maahan "troll" laakiin, maxay soo kordhinaysaa marka la barbar dhigo kordhinta aan ka heli karno gnomeShell?
Layli ahaan waxay umuuqataa mid xiiso leh, ma kujirtaa wax horumar ah?
Daacadii, hadaan kuu sheego been baan ku sheegayaa, malaha waa isku mid. Midka aad ii sheegto wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee aan isku dayo inaan rakibo, laakiin sababo jira awgood (xaddidaadaha qaarkood ee ka imanaya ISP-ga), bogga fidinta Gnome ma ii oggolaanayo inaan si toos ah u rakibo.
Waxaa igu kalifay xiisaha aan u qabo waan rakibay dhibna ima siin; Maskaxda ku hay in ka kicinta kordhinta goobta rasmiga ah ay dhibaato u keento daalacayaasha qaarkood.
Isku soo wada duub salaanta oo sii wadaysa daabacaadda illaa iyo hadda
Hagaag, waxaan ka sameeyay nooca hadda aan haysto ee Firefox, laakiin waxaan u maleynayaa inay ka sii badan tahay dhibaatada marin u helista. Mahadsanidin isbarbardhig, waa wax lagu farxo sida had iyo jeer inaan halkan ku haysto.
Kaliya waad iga dhigtay inaan dib ugu noqdo pidgin! Waxaan rajeynayaa in qorfe si rasmi ah loogu sii daayay LMDE, waxaan sameyn doonaa rakibo gebi ahaanba cusub waxaanan rajeynayaa inay wax walba si fiican u socdaan!
Waa aniga Haddaanan waxba qaban ... 😛
Mahadsanid, waan ku faraxsanahay inay ka shaqeysay hartayda. XD.
Aaaah, waqti badan ayaan ku lumiyay iskuday inaan uga tago Gnome 3 sidaan jeclahay, wax walba waa madax xanuun leh gnome-shell. In kasta oo aan doorbido OpenBox iyo Mate, waxaan jecelahay inaan la socdo Cinnamon iyo Gnome 3. Si aan u muujiyo saamaynta Gnu / Linux, Weligay ma jeclaan KDE, dib ayaan u soo celiyey, si aan u arko waxa ay dib u soo celinayso.
Waxaan ku laaban doonaa bloggan. Ka qayb qaadasho wanaagsan
Ku jawaab Ney
Kordhin si loo qariyo astaamaha qaar guddiga sare ee Gnome-Shell
Weydii Libreoffice oo la heli karo